Chitatu, Ndira 16, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Mukushanduka kweiyo indasitiri yemakomputa, isu takave nayo Hardware - iyo michina inofanirwa kumhanyisa kunyorera. Uye isu takave Software, mhinduro dzakashandisa zviwanikwa izvi kuti zviite basa iro raigona kutenga nekuisa kubva kune akasiyana midhiya. Mazuva ano, unogona kukopa software pasina midhiya.
Makumi maviri emakore eHardware uye Software
Hardware ine kukwidziridzwa uye kutsiva. Ini chokwadi ndarasa njere dzemakomputa ese andava nawo kusvika zvino. Ini ndine mafupa akasarudzika asingasviki mashanu pamwe neyakafa imwe laptop mumba mangu.
Software ine kumisikidza uye kukwidziridzwa kunoisa shanduko mune software application. Iyo yechinyakare system yatiri kushanda tichinetseka nanhasi. Ini ndaive nesoftware yekuvandudza pakutanga nhasi izvo zvaida kuti ndivhare uye titangise yangu MacBookPro. Ini handina kumbobvira ndawana OSX yekuenda inoenda zvakashata, asi nguva imwe neimwe ini handigone kubatsira asi kutora zvishoma kufunga - ndichifunga kuti zvakaipisisa zvichaitika uye ini ndinorasikirwa nebasa rangu rese. Ndine network yekutyaira kwandinochengetera zvandaidzora zvonyorerwa uye bhainda reCD kwandinochengetera zvimwe (uye zvinogara zvichiwanika zvisipo)
Software seGoogle Spreadsheet, Google Analytics, Gmail, ExactTarget, uye toni yevamwe inoenda ne 'web-based application' kana 'browser-based application' kana isu tinokanda muchidimbu, SaaS. Icho chirevo chinotyisa uye chinotsanangura mhando yebhizinesi iri inopfuura iyo mhando ye'ware 'iri. Zvakare, mazhinji SaaS kunyorera vane kukwidziridzwa kana kuburitswa kukuru. Hazvidi kuiswa kana kudzoreredza, asi hazviwanikwe kwenguva yakati.
Izita rakaringana rekushandisa kwanhasi rinogona kunge riri Netware, asi rinotaridzika senge Novell ane izwi rekuti trademark. Webware inogona kushanda, asi zvinoita senge C | Net arikushandisa izvo. Zvinotaridza senge browserware inogona kunge iri mukana - asi irimwe syllable.
Chinokosha ndechekuti Webware (ini handina kuona chiratidzo) ndiyo inotevera shanduko yezvatinoshandisa. Nhasi, hapana chikonzero chekushandisa kuti chimire kumhanya. Tine mazana emapeji mune yedu application kubasa uye tinokwanisa kutenderera mapeji matsva tisina kumbobvisa pasi ekare. Ndine chokwadi chekuti zvishoma zvekuvandudza zvinogona kuitika futi uko vashandisi vanogona shanduko inogona kuitika pakati pechinyakare uye zvitsva zvinoshandiswa.
Dhatabhesi dzinogona kudzokororwa pamhepo, kana matafura matsva echinguvana anogona kuvakwa kuti awedzere shanduko. Chokwadi, ibasa rekuwedzera, asi yangu poindi ndeyekuti zvinogoneka. Hatifanirwe kukanganisa vatengi vedu zvakare.
Handina floppy drive inoshanda mumba mangu. Ini kashoma kushandisa CD / DVD yangu, chero. Zvinenge zvese zvandinoita ikozvino web-based. Pandinotora nekuisa software, ini ndinowanzo chengeta kopi pane yangu Vadivelu Comedy Buffalo Tech network drive.
Kunyangwe mune bhizinesi, hazvidiwe. Pandakatanga kumusoro Mudiki Indiana zvaPat Coyle, isu hatina kuenda neanotambira. Iyo application inovakwa uye inogarwa ne Ning. Tine ese marongero edomain anotaridza Google Apps kwatinogona kushandisa email pamwe neGoogle Docs. Hapana hardware, hapana software… asi webware.
Sei tisingazvideedze kuti Webware?
Tags: HardwareSoftwaresoftware sebasawebhu kunyorerawebhu webhumadandemutande ewebhuweb-based mapuratifomuwebware
Nei Pasina Kukakavara Kwakasimba?
Jan 16, 2008 na11:38 PM
Domain name yatotorwa
Handizivi asi zvingadaro
Jan 17, 2008 pa 2: 52 AM
Ndozvifarira. Asi hausi kufuratira here "middleware" iyo yaizogadzirisa matambudziko edu ese mumakore makumi mapfumbamwe. Ndinoda webware. Zvinofadza kuti hapana trademark. Ndine hurombo iyo URL yakatorwa sezvimwe zvese.
Jan 17, 2008 pa 10: 07 AM
Ini ndinoda chaizvo ese mawebhu-akavakirwa maapplication anoramba achibuda uye anowedzerwa kune yangu toolkit. Ini ndinoshandisa Google Docs sekupenga uye kune mumwe munhu anoshandisa 3-4 akasiyana makomputa muzuva rimwe chete, inoponesa hupenyu.
Nekudaro, pese pandinotanga kushandisa webhu-based sevhisi, panogara paine izwi diki iri kuseri kwemusoro wangu richidedera pane imwe nguva. Pfungwa iyi ndeyekuti pandinorasikirwa neinternet yangu, ndinotadza kuwana ese eGoogle Docs, dhatabhesi yangu yemainvoice evatengi, email yangu, IM yangu, mafoto angu asingaverengeki paFlickr, nezvimwe.
Iyi shanduko yakanangana newebhuware inoita kuti tiise akawanda uye akawanda emazai edu mubhasiketi rimwe. Uye tobva tasunga tambo refu kudengu iroro torikandira kunze muchadenga. Chero bedzi tambo yakabatana, zvose zvinonaka. Asi kana tambo iyoyo yanyangarika, ndinogona kunge ndisina simba zvakare.
Ini ndinofungidzira pfungwa yangu apa ndeyekuti kuti Webware inyatso simuka, tinoda yakavimbika, yakapararira, uye yakawandisa kuwana internet. Uye kuva newebhu browser pafoni yako hakuna kufanana. Chokwadi, ndinogona kubatanidza laptop yangu kune yangu verizon mbozhanhare uye kusefa, asi kana ndikaenda pamusoro peimwe bandwidth kana kurodha muganho mumwedzi mumwechete, ndinogadzwa. Handidi zvekumanikidzika zvakadaro.
Jan 17, 2008 na5:04 PM
Zvinosetsa unofanira kutaura izvi. Ini ndanga ndichingoudza mutengi nezuro kuti yakawanda software yandinomhanyisa iripo chete paInternet sewebhu application. Ikozvino ndoziva zvekudaidza zvinhu izvi… webware!
Jan 18, 2008 pa 7: 29 AM
Ndanga ndichitaura zvakafanana kwenguva yakati rebei… Ndinogara ndichitaura nezve CMS/Online maapuro sewewebhu kare… Ndinoshamisika kuti hatichanzwi nezvazvo zvakanyanya.
Jan 18, 2008 pa 9: 39 AM
Webware inonzwika zvakanaka. Munguva pfupi, makambani makuru emakombuta / IT achapesana nezvigadzirwa zvavo paWebhu. Aya ndiwo maitiro uye achiri kutanga kuitika nekuuya kwewebhu-inotenderera software.